DAAWO:Gabadh uu Dhalay Dr Cali Khaliif Galaydh oo Nin Cadaan Guursadey Aroos Cajiibana U Dhigay. – Marqaan News
Daawo:- Siyaasi kasoo jeeda Puntland oo suaalo adag ka keenay xaqiraadda uu Kheyre kusameeyay Askarta Gadoodsan 11 hours ago
Deg-deg:- MD Xaaf oo xabsiga dhigay laba kamid ah wariyaasha Dhuusamareeb iyo sabab cajiib ah oo loo cuskaday. 13 hours ago
Sidee maanta loogu tukaday salaadii Jimcaha Masaajida New Zealand “Khudbad iyo Baroordiiq heer sare ah”. 13 hours ago
Shil naxdin leh oo ay ku la’deen ciyaal Iskuul oo ka dhacay Duleedka Boosaaso “Maydad iyo dhaawac”. 14 hours ago
Daawo Muuqaal Naxdin leh:- Shan Masaajid oo kuyaal London oo la weeraray iyo Cabsida yurub oo Korodhay. 19 hours ago
Home 2018 October Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta DAAWO:Gabadh uu Dhalay Dr Cali Khaliif Galaydh oo Nin Cadaan Guursadey Aroos Cajiibana U Dhigay.
October 14, 2018 | by	marqaan | 6
6 thoughts on “DAAWO:Gabadh uu Dhalay Dr Cali Khaliif Galaydh oo Nin Cadaan Guursadey Aroos Cajiibana U Dhigay.”
Ahmed October 14, 2018 at 7:29 am · Edit
Aroosku waa wax lagu farxo oo loo riyaaqo. Waxaanan leeyahay Mabruuk. Labadii isku waara ee ubad kheyr qabana idinsiiya Alle ha’idinka galo.
Dhanka kalena waxaan diiday Aroos Gaalkan loo dhigay. Wuxuu u’eg yahay Aroos Masiixi ah ama Yuhuudi ah in loo qabano. Waayo inantii waxa galbinaya Aabaheed iyo Hooyadeed. Inankii Altarka ayuu kusii sugayaa. Waxaanan la tusin uun sawirka Baadarigii meher gaalka samaynayay.
Saas oo ay tahay Illaahay isaga ayaa macbuud ah oo qofwalbaaba camalkiisa sax iyo khalad xisaabinta doona. Issaga ayaa wuxuu ka yeelayo garanaya.
Ahmed October 14, 2018 at 7:33 am · Edit
ninkan haddii uusan Muslim ahayn ma guursan ee xaraan ayuu ku haystaa yaan Lagu farxin .
The October 14, 2018 at 12:11 pm · Edit
Cali waxaan ku ogeeyn nin aqli badan MArka MA sides ayaa u danysay
Muqdisho@gmali October 14, 2018 at 2:09 pm · Edit
Cali khalif waa ku shubo fadlan hal Ma yaqan caruurta waa u xarashar lacag low yaqan xaraan ku nax waye
Jama October 14, 2018 at 4:06 pm · Edit
Muslim ama gaal ha ahaadee ajanabi meel ku geyn maayo! Marka ilmahaaga aad lacag aad ummadda kasoo dhacday ku korisid maxsuulku wa kaas!!
Maanta Cali reerkiisiina SNM buu u hibeeyay, gabadhiisiina nin ajnebi ah ayuu u hibeeyay!! We knew he always had an inferiority complex!!
Ahmed October 14, 2018 at 7:11 pm · Edit
Kala saar siyaasada iyo arimha kale. Kana istaaqfuruleyso ereyada aad kaftanka moodeyso eensan kaftanka geli.
Cali arintan qurbojoog oo dhan ayuu kala simanyahay. Caruurta halkan ku kortaa ciday jeclaadaan ee ay rabaan ayuunbay guursadaan. Hadaad diido intay kaa tagaan ayay iska guursadaan oonay dib danbe juuq iyo jaaq kuugu soo odhan. Dhaqanka gaalada ayay qaar iska qaataan. Waalid iyo xushmeyn iyo wax kale doona dan kama galaan.
Kuwa xitaa diinta lagu barbaariyo eenan masjitka ka dhamaan ayaa Ajahanabi u keena waalidkood. Ka/ta mid muslim ah keena ayaaba nasiib badab.
Jaamacow beri ka maalin inantaadu nin gaalnimo ku guursada ayay kuu keeni kartaa. Markaas iska jir weedhaha dib kuugu soo noqon kara adiaga.
Siyaasadu waa halkeeda oo taas sidaad doonto baalaha uga rif. Tanise waa arin qoys oonan siyaasad shuqul ku laheyn. Cali laga yaabee markuu u taag helli waayay uu kala doortay inuu inantiisa uu jecelyahay deyriyo iyo inuu intuu iska samro iska aqbalay.
Eitherway I feel sorry for him. May aheyn in sawiradan oo kale miidhiyaha ladoo dhigo. Waxay aheyn la qadariyo qoyskaas.